« L’oragé », asa soratr’ilay teratany frantsay Douna Loup fa nadikan’i Johary Ravaloson tamin’ny teny malagasy. Tantaran’i JJ Rabearivelo no anisan’ireo asongadin’ilay boky mitondra ny lohateny hoe « Hotsaka », nampahafantarina omaly tetsy amin’ny trano …Tohiny
Miara-dia amin’ny fety hatrany ny mozika sy ny zava-pisotro. Ao anatin’ny fankalazana ny faha-65 taonany, nanova sary famantarana sy ny tavoahangy misy azy ny zava-pisotro « Caprice Orange », izay nomarihina tamin’ny hetsika niarahana tamin’ny …Tohiny
Maro amin’ireo vehivavy malagasy no tratran’ny homamiadan’ny vozon-tranon-jaza sy ny homamiadan’ny nono. Lafo dia lafo anefa ny fitsaboana azy ireo, ary sarotra ihany koa aza ny fitiliana satria dia handoavam-bola. Noho izay indrindra, amin’izao ankatoky …Tohiny
Vazaha nikasa hanolana : Nadoboka am-ponja vonjimaika
Omaly no natolotra teo anatrehan’ny fampanoavana tany Antsirabe, ilay teratany vahiny 74 taona, mizaka ny zom-pirenena frantsay nikasa hanolana zazavavy kely 07 taona tany an-toerana. Rehefa nivoaka ny didy, dia fampidirana am-ponja vonjimaika avy hatrany …Tohiny